China akpụkpọ ahụ Ọdịdị klas ụlọ ọrụ na-emepụta | Zhenyuan
Membrane Ọdịdị bụ ụdị ihe owuwu na ihe owuwu ya na usoro nke usoro a, bụ ihe dị elu na-agbanwe ihe nkiri na ihe enyemaka site n'ụzọ ụfọdụ na-eme ka nrụpụta ya dị na nrụgide nsogbu, na nrụgide n'okpuru njikwa ụdị ụfọdụ. udi, dị ka isi ahu, nkpuchi ihe owuwu ma ọ bụ ụlọ ma nwee nkwesi ike zuru oke iji gbochie ibu dị na mpụga nke ụdị warara.
Ọkpụkpụ akpụkpọ ahụ na-agbaji usoro nke usoro ihe eji eme ihe dị ọcha, ya na ihe ngosi ya dị iche iche na-adọrọ adọrọ, dị nkenke, dị ndụ, na-agbanwe agbanwe ma dị nro, ike na mma mara mma, na-enye ndị mmadụ mmetụta ọhụrụ na nke ọhụrụ. na onye nnọchianya, bụ usoro ihe owuwu, usoro nhazi, ezigbo ụlọ ọrụ kemịkalụ, sayensị ihe onwunwe, teknụzụ kọmputa dị ka otu n'ime ngwa ọrụ nke injinia, nwere ọdịnaya dị elu na nka na nka, oke ya nwere ike ịbụ mgbanwe na-enweghị isi site na mkpa nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Ejikọtara ya na gburugburu ebe obibi, iwu ihe oyiyi nke ọrụ ahụ, yana ike bara uru, ọtụtụ ngwa. Nnukwu ụlọ ọrụ ọha na eze, dị ka usoro egwuregwu ụlọ egwuregwu, ụlọ ọdụ ụgbọ elu, ebe ngosi, ebe ịzụ ahịa, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe ikpo okwu. , wdg A pụkwara itinye ya na ụlọ ọrụ ntụrụndụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụzọ mbata na akara ala ma ọ bụ ọdịdị ala buildi ngs, wdg.
Membrane Ọdịdị uru:
(1) Ogologo oge: Ọkpụkpụ akpụkpọ ahụ nwere oke ibu na arụmọrụ dị egwu, nke nwere ike iwepụ mkpa maka nkwado dị n'ime, merie nsogbu ndị usoro ọdịnala na-enweta na nghọta nke ụlọ ogologo (na-enweghị nkwado), mepụta nnukwu oghere a na-ahụ anya na-enweghị mgbochi, yana n'ụzọ dị irè dịkwuo ohere usable ebe.
(2) nka：akpụkpọ ahụ Ọdịdị mebiri site na omenala Ọdịdị ụdị, nke dabere na ịme ngosi uwe, agba, nwere ike ikpokọta na eke ọnọdụ, nye zuru play ka pụrụ ichetụ n'echiche nke-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, e wuru dị ka echiche nke omenala ije siri ike ịghọta usoro. na ụdị dị iche iche, na agba bụ ọgaranya, ọgaranya oge ekpomeekpo, na-egosipụta mma nke akụkụ nrụgide.
(3) aku na uba: Ihe omuma a nwere ihe ntanye oku, nke nwere ike belata ike ọkụ na oge n'ehihie ma chekwaa ike; transmissionnye ọkụ ọkụ na-acha ọkụ n'abalị nwere ike ịmepụta ọmarịcha ọdịdị ala.Ọzọkwa, a ga-agbasasị usoro ahụ, dị mfe ịkwaga, tumadi na iwu ihe nkpuru nkpuru nke ulo uku buru ibu, kari onodu aku na uba.
(4) nchekwa: Ihe nkiri a nwere ire ọkụ na nguzogide okpomọkụ dị elu, nwere ike izute ihe a chọrọ maka mgbochi ọkụ; Ihe nhazi akpụkpọ ahụ na-agbanwe agbanwe, nke nwere ike ibute nnukwu mbugharị ma ọ dịghị mfe ịda. Usoro nhazi ahụ nwere ọkụ nwụrụ anwụ ma rụọ ọrụ ọma dị egwu.
(5) Ihicha onwe ya: A na-eji ngwongwo akpụkpọ ahụ nke nwere mkpuchi nchebe na ụlọ akpụkpọ ahụ, nke na-adịghị aghọ nnyapade. Enwere ike ihicha uzuzu nke na-ada n'elu ihe eji eme ihe site na mmiri ozuzo site na mmiri ozuzo iji nweta ezigbo nhicha onwe ya ma hu na ndu nke ulo.
(6) obere oge ịgba： ọnwụ nke diaphragm, mmepụta nke waya na nchara ígwè, wdg na-agwụ agwụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, belata oge owuwu ahụ, ma jiri ihe owuwu ndị siri ike ma ọ bụ mmiri mejupụtara, wdg. N'otu oge ahụ, zere iwu nke obe, na-ewu saịtị dị nnọọ waya, ígwè Ọdịdị na njikọ nke diaphragm echichi ọnọdụ na ndagide nke usoro, otú ahụ ka saịtị na-ewu, ngwa ngwa echichi, ikwu na omenala obere-ewu oge ịgba maka oru ngo.
(7) Nnukwu ngwa: Site na ọnọdụ ihu igwe, ụlọ ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara sara mbara; N'ihe banyere ogo, ọ nwere ike ịbụ obere ka otu ụlọikwuu ma ọ bụ ihe osise ubi, ma ọ bụ buru ibu dị ka ụlọ na-ekpuchi iri puku kwuru iri ma ọ bụ narị narị puku E nwedịrị echiche nke ikpuchi obere obodo na itinye n'ọrụ mmadụ kere.
Klaasị Structure Class
Ihe osise axonometric
Architectural axonometric ịbịaru
Nke gara aga: Okpokoro Net, Klaasị Structure Heterosexual
Osote: Imewe Obodo
Imewe Structure Design
Membrane Structure ịbịaru Design